E-Visa Indiana Rehefa Tonga
MANGATAKA NY VISA
Visa amin'ny fahatongavan'ny Indiana
Indian Visa On Arrival dia visa elektronika vaovao izay mamela ireo mpitsidika mety hangataka ny Visa ihany fa tsy misy fitsidihana ny masoivohon'i India. Azo zahana an-tserasera izao ny Visa mpizahatany karana, visa fandraharahana karàna ary visa ara-pitsaboana karana.
Raha vao nanomboka nanova ny Visa ny Governemanta India politika nampiditra Visa Indiana vaovao (eVisa India) izay nantsoiny hoe ny Elektronika Ilay mpizahatany Indiana e-Visa ao amin'ny Arrival (eVisa India Tourist) izay namela ny olom-pirenena avy amin'ny firenena vitsy dia vitsy hangataka ny Visa any India amin'ny Arrival an-tserasera raha mikasa ny hitsidika ny firenena amin'ny maha mpizahatany azy ireo izy ireo hizaha fizahana sy fialamboly. Saingy taorian'ny fanavaozana tanteraka ny politika Visa any India ny India Visa momba ny fahatongavany nanomboka ny taona 2015 dia natolotra ho an'ireo mpitsidika tonga any India noho ny tanjon'ny asa ara-barotra sy ara-pitsaboana. Business e-Visa Indiana ary E-Visa Indiana. Ity Visa Indiana Vaovao amin'ny fahatongavana na e-Visa karana ity, araka ny fantatra, dia azo ampiharina amin'ny Internet, azo alaina amin'ny firenena maro hafa, ary ny fomba mora sy mora indrindra hitsidihana an'i India. Azonao atao ny mangataka ny Visa Vaovao amin'ny Arrival ho an'ny India na E-Visa indiana amin'ny Internet eto mihitsy nefa tsy mila mitsidika ny masoivohon'i India eo an-toerana mba hahazoana izany.
E-Visa Indiana dia dingana iray an-tserasera tanteraka, miaraka amin'ny fandoavam-bola an-tserasera sy ny fahazoana ny e-Visa karana voaray amin'ny mailaka.
Inona no hahatonga anao ho mendrika amin'ny visa any India any amin'ny fahatongavany na e-visa karana?
Azonao atao ny mahazo visa any New India amin'ny fahatongavany na e-visa karana raha:
Olom-pirenena amin'ny iray amin'ireo firenena 180+ ianao izay olom-pireneny azo ekena amin'ny Visa Indiana;
Raha tsy miasa na tsy misy asa no anton'ny fitsidihanao fa ”
Mifandraika amin'ny orinasa, na
Ho an'ny fitsaboana, ary
Ianao dia tsy mikasa ny hijanona any India mandritra ny 180 andro mahery;
Tsy hiditra ao amin'ny firenena ianao raha tsy amin'ny alàlan'ny Post of Immigration Check izay misy seranam-piaramanidina 28 sy seranan-tsambo 5.
Misy karazany efatra ny e-Visa Indiana na ny Visa Vaovao amin'ny fahatongavan'i India, dia ny Tourist e-Visa, Business e-Visa, Medical e-Visa, ary Medical Attendant e-Visa, ary mila mihaona ihany koa ianao fepetra manokana amin'ny karazana Visa ao anatin'ireto no tadiavinao. Mariho fa tsy mila an'ity Visa ity ianao raha mikasa ny hijanona ao amin'ny seranam-piara-manidina fotsiny mba hamindra toerana na hamindrana toerana.
Fepetra takiana amin'ny Visa any India Vaovao amin'ny fahatongavana na e-visa karana:
Na inona na inona karazana New India Visa amin'ny fahatongavanao kasainao dia eto no ahitanao ny antsipiriany rehetra araka ny nomen'ny Governemanta India
Kopia elektronika na notarafina tamin'ny pejy voalohany (biografika) an'ny pasipaoron'ny mpitsidika, izay tsy maintsy ny pasipaoro mahazatra, ary izay tsy maintsy mijanona mandritra ny 6 volana farafahakeliny hatramin'ny andro nidirana tao India, raha tsy izany dia mila manavao ny pasipaoronao ianao.
Tokony ho azonao antoka ihany koa fa ny pasipaoronao dia manana pejy banga roa, izay tsy ho hita amin'ny Internet, fa ny tompon'andraikitra amin'ny sisin-tseranana amin'ny seranam-piaramanidina dia mila ireo pejy banga roa hanakanana ny fidirana / fidirana.
Fepetra takiana amin'ny sary e-visa karana tsy maintsy ekena.
Kopian'ny mpitsidika vao tsy ela akory izay sary miloko amin'ny pasipaoro (ny tarehy ihany, ary azo alaina amin'ny telefaona izy io)
Miasa adiresy mailaka
A carte debit na carte de crédit ho an'ny fandoavana ny sarany fangatahana e-Visa karana.
A tapakila miverina na mandroso avy any India.
Requirements manokana amin'ny karazana e-Visa karana mangataka ianao.
Mangataka ny Visa any India Vaovao amin'ny fahatongavany na e-visa karana:
Tokony hangataka ny Visa Vaovao amin'ny fahatongavana ho an'i India na ny e-Visa karana farafaharatsiny 4-7 andro mialoha ny sidinao na ny daty nidiranao ao amin'ny firenena. Amin'ny ankabeazan'ny tranga dia tsy tokony haharitra mihoatra ny 4 andro ny fankatoavana ny fangatahana Visa fa amin'ny tranga sasany dia mety maharitra 7 andro. Tsy hahazo ny Visa New India amin'ny fahatongavana any amin'ny seranam-piaramanidina ianao satria tsy misy mitovy aminy ny taratasy fa tsy maintsy mangataka izany amin'ny Internet ianao ary mandoa izany amin'ny Internet ihany koa. Raha vantany vao nekena ny fangatahanao ny Visa Vaovao amin'ny Arrival ho an'ny India na e-Visa dia ho azonao amin'ny kopia malefaka ary mila mitondra an'io kopia kely na pirinty io miaraka aminao mankany amin'ny seranam-piaramanidina ianao.
Famaranana ho an'ny Visa any India amin'ny fahatongavany
Raha mihaona amin'ny visa Arrival na Indiana e-Visa Indiana ianao ary mahafeno ny fepetra takiana amin'izany ary koa manana ny antontan-taratasy ilaina amin'ny karazana India Visa amin'ny Arrival na Indiana e-Visa izay tadiavinao avy eo. afaka mangataka mora foana amin'ny Visa any India ianao Taratasy fangatahana e-Visa Indiana dia tsotra sy mahitsy. Tsy tokony hahita olana ianao amin'ny fampiharana sy fahazoana ny Visa any India. Raha, na izany aza, manana fisalasalana bebe kokoa momba ny fomba fanao ianao ary mila fanampiana amin'izany, na mila fanazavana hafa tokony hataonao Birao fanampiana an'i e-Visa India ho fanohanana sy fitarihana.
Raha ho avy ianao ary mila fitarihana amin'ny antontan-taratasy, Fepetra takiana amin'ny e-Visa Indiana mandrakotra an'io amin'ny antsipiriany
Raha mpandeha Cruise Ship ianao ary mikasa ny hamakivaky ny làlan'ny ranomasina dia torolàlana ho an'ny Indian Visa Online (e-Visa India) ho an'ny Cruise Ship misy ny mpandeha.
TSY MAINTSY HITA AZY
TSY MAINTSY MAHITA KARNATAKA